Mid ka mid ah hablihii caanka ahaa ee fanka Soomaalida oo saaka geeriyootey – SBC
Mid ka mid ah hablihii caanka ahaa ee fanka Soomaalida oo saaka geeriyootey
Posted by editor on Aktoober 6, 2011 Comments
Faadumo Qaasim Hilowle oo ka mid aheyd hablaha xudunta u ahaa fanka Soomaaliyeed isla markaana caanka aheyd ayaa saaka si kadis ah ugu geeriyootey magaalada London ee caasimada UK.
Geerida Faadumo Qaasim ayaa la sheegay inay aheyd mid kadis ah iyadoo wax xanuun ah aanu aheyn, waxaana la sheegay in uu wadnuhu istaagey.
Marxuumad Faadumo Qaasim Hilowle ayaa fanka Soomaaliyed ku soo dhex jirtay muddo dheer, iyadoo si weyn ugu caan baxday ku luuqeynta heesaha Banaadiriga, waxaana ay ka dhaxashay fanka Aabaheed Qaasim Hilowle oo ka mid ahaa dadkii kaalinta ka soo qaatey halgankii xornimo doonka Soomaaliyeed.
Faadumo Qaasin mudooyinkii ugu dambeeyey waxay ku nooleyd dalalka Yurub iyadoo sanadihii u dambeeyey deganeyd magaalada London.
Heesaha caanka ee ay ku luuqeysay Faadumo Qaasim waxaa ka mid ah heesta wadaniga ah ee Dalkeygow, Xabiibi, Qeys iyo Layla, Aniga Calafkey iyo kuwa kale oo aad u fara badan.
Faadumo Qaasim waxay ku dhalatey magaalada Muqdisho sanadkii 1945-kii, waxaan ka codsaneynaa cid kasta oo haysa taariikhdeeda inay inoogu soo gudbiyaan E-mail-ka webmaster@allsbc.com.
Hadii aad tacsi u dirayso qoyska & ehelada Marxuum Faadumo Qaasim Hilowle ku soo qor qaybta hoose.
Link- Video-ga hoose ka daawo mid ka mid ah heesaha ugu caansan ee ay ku luuqayso Fanaanada Faadumo Qaasim.
mukhtaar jaamac says:
Aktoober 6, 2011 at 11:47 am
inaa lilaahi wa inaa ilahay raajucuun waxan halkan tacsi uga diraya faadumo qaasim hilowle oo ahan jirtay fanaanad ilahay waxan uga baryey inuu qabrigeda u waasiciyo samair iyo imaan ka siiyo intii ehel iyo qaraabo
Aktoober 6, 2011 at 1:25 pm
انا الله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويكون معها ويقفر دنوبها
salman c/naasir saxane says:
Aktoober 6, 2011 at 2:49 pm
illahay ha u naxariisto faadumo qaasim hilowle waa fanaanad caan ahayd oo taarikh fanka ku lahayd dhal fanaan bay ahyd
Aktoober 6, 2011 at 4:02 pm
INAA LILAAHI WA INAA ILAYHI RAAJICUUN…..faaduma qaasim allaha unaxariisto ayaan leeyahay aniga oo ahaan jirey abwaaniinti kooxda horseed ninki ugu da.da yaraa alxamdu lilaah hadda waan ka toobad keenay waayo waa danbi weyn wixii ka nool qoyska reer qaasim hilowlena ama kuwa kalaba waxaan leeyahay haka toobad keenaan qofka risaaqadi allaah uqoray wuu helayaa magafayso marka haku doono xalaal allaah sw.wuxuu yiri fii kitaabihi xakiim (wamina naasi man yashtarii lahuwal xadiis liyudhila can sabiililaah biqeyrin cilmin walaa huddan fabashirhum bicadaabin aliim) dadka waxa kamid ah qaar ka mushtaraya hadal si ay dadka uga dhumiyaan jidka alle cilmi la.aan iyo hanuun la.aan haku bishaarayseen caddaab xanuun badan)alaha iga cafiyo hadaan macnaha akhriska qalday aayadaas marka kuwaa waa wada garanaynaa kuwa shaleemooyinka istereo buugaagta waxyaalahaa kamushtara haka toobad keenaano waayo nebiga scw.wuxuu yiri (taa.ibu danbi kaman laa danba lah) qofkii toobad keenaa wuxuu lamid yahay qof aan danbi lahayn) markaa ikhwaanii fillaah katanaasula hadda waqtibaad haysataan dahabi ah xadiis kalaa macnihiisu yahay qofkii jideeya wanaag intii wanaagaa ku raacday buu laxasanaad yahay iyaga oon koodii laga nusqaaminayn kii xumaan sameeya fidiya oo lagu daysado intii xumaantaa kudhaqantay buu sheer kulayahay macnaha shirko halaga haro dhegaysiga alifaada heesaha iyo iibkoodaba waxaa kasoo hara kuwa wanaaga masaalaxada wacyigelinta oo aan muusik lahayn shaykh cumar faaruuq iyo kuwa lamid ah allaha firdawsa ka waraabiyee kuna waariyee arka bilyan tafsiir ah quraan xadiisyo ah baa laga dhaxlay waa sadaqatu jaariya fanaanow munkar iyo niiko qawlulaqwi baa lagaa dhaxlayaa qofka heesaha dhegaystaa mumin manoqdo qalbiguna wanaag iyo danbi mawada qaado midbaa ku negaanaya qalbigiina heesaha kasaara quraanka dikriga aan gelino allaah sw.nebimuxamad scw wuxuu yiri markay dheheen gaaladi quraysheed wuu gabyayaa (wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbaghii lah in huwa ilaa dikrun waqur.aanu mubiin) ma.aanu barin nebiga mana kuwanaagsana waxaan dikri iyo quraan cad ka ahayn…marka allaah hanaga dhigo kuwii toobad keena uuna ka aqbalo (xirsixuseen4@hotmail.com
ahmad ugaas qaboojiye says:
Aktoober 7, 2011 at 2:39 pm
inaalilaahi wa inaa ilahi rajicuun allaha un naxariisto faduma qasiim hiloowle samir iyo imaana alaha ka siiyo ehelkeedda iyo qarabadeedda